विजयी उत्सवमा सहभागी हुन बनेपा पुगेका ओली काँग्रेमाथि किन खनिए ? (सात तस्बिरसहित) « Pahilo News
विजयी उत्सवमा सहभागी हुन बनेपा पुगेका ओली काँग्रेमाथि किन खनिए ? (सात तस्बिरसहित)
प्रकाशित मिति : 19 May, 2017 5:21 pm
५ जेठ । बनेपा नगरपालिकामा एमालेले जितेपछि विजय उत्सवमा सहभागी हुन एमाले महासचिव ईश्वर पोख्रेललाई साथमै लिएर बनेका पुगको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विजय उतसवमा सहभागी मात्र भएन उनले केहीबेर भाषण पनि गरे । काँग्रेसप्रति लक्षित गर्दै उनले सो पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा धेरै सिट जितेकोमा आश्चर्यसमेत व्यक्त गरे ।
उनले चुनावको परिणामले एमाले कार्यकर्ताले अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखाएको समेत उल्लेख गरे । उनले बिग्रिसकेको कांग्रेसले किन यत्रो भोट ल्यायो भनी प्रश्न मात्र गरेनन् उनले जनतालाई अझै बुझाउन बाँकी रहेको पनि उल्लेख गरे ।
सिद्धान्त र बिचारबाट च्यूत भइसकेको कांग्रेसको बारेमा जनतालाई प्रष्ट पार्न बाँकी रहेको भन्दै उनले राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिने एमालेले ल्याएको सिट कम भएको पनि दाबी गरे । उनी विजयी जुलुमा सभागी भएका सात तस्बिरः